Jacksonville Jaguars သည် In-Stadium ကြီးမျက်နှာပြင်ရှိဗီဒီယိုတင်ပြချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ChyronHego Virtual 1st ကိုတပ်ဖြန့် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » In-အားကစားကွင်းနဲ့ Big-Screen ကိုဗီဒီယိုတင်ဆက် Enhance မှ Jacksonville Jaguar အသုံးချ ChyronHego ရဲ့ Virtual 1st
In-အားကစားကွင်းနဲ့ Big-Screen ကိုဗီဒီယိုတင်ဆက် Enhance မှ Jacksonville Jaguar အသုံးချ ChyronHego ရဲ့ Virtual 1st
'' Down နှင့်အဝေးသင် '' တိုးချဲ့ဂရစ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်အပြင်အသံလွှင့် In-အားကစားကွင်းအတွေ့အကြုံ '' ပရိသတ်များမှစိတ်လှုပ်ရှားထည့်ပေးသည်
MELVILLE, နယူးယော့ - ဧပြီလ 30, 2015 - အဆိုပါ Jacksonville Jaguar, Virtual 1st ၏ပထမဆုံးအားကစားကွင်း Jumbotron ဖြန့်ကျက် installed ပါပြီ ChyronHegoအမေရိကန်ဘောလုံးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်း 's "ကိုဆင်းနှင့်အကွာအဝေး" အသံလွှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်။ virtual 1st အဆိုပါ Jaguar '' သစ်ကို 8K ပေါ်တွင်ပြသထားသော Real-time အရေးယူမှုတိုးမြှင့်ကာတွန်းကားကို virtual ပထမဦးဆုံး-Down နှင့်လိုင်း-of scrimmage ဂရပ်ဖစ်ကိုထောက်ပံ့ပေး HD ကမ်ဘာပျေါတှငျမိမိတို့၏မျိုး၏အကြီးဆုံး, ဗီဒီယို scoreboards LED ။
တိုက်ရိုက်လွှဘောလုံးဂိမ်းလွှမ်းခြုံမြှင့်တင်ရန်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကိရိယာတခုအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, Virtual 1st တင်ပြလျင်မြန်စွာဂိမ်း-ကစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လွယ်ကူ-to-အတိုင်းလိုက်နာပုံပြင်ကိုပြောပြကူညီဗီဒီယိုပြသမှုနှင့် sensorless ကင်မရာနည်းပညာပေါင်းစပ်။ ထုတ်လွှင့်ကွန်ယက်ရဲ့ On-ဝေဟင်စတိုင်ကိုက်ညီဖို့ဂရပ်ဖစ်စိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းအတူဆင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြမှကို virtual scrimmage ၏လိုင်းများ, ပထမ-Down လိုင်းများနှင့်ကာတွန်းဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းပေးနိုင်ခြင်းနှင့်အကွာအဝေးဖြစ်ကြသည်။
ယင်း၏နေအိမ်အားကစားကွင်းများအတွက် Jaguar '' အကြီးအကျယ် 2014 ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံစီမံကိန်း EverBank ဖျော်ဖြေမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ထိုအဖွဲ့ကထုတ်လွှင့်ဘုံအပြင်ဘက်ကို Virtual 1st နည်းပညာလျှောက်ထားရန်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကနဦးစမ်းသပ်ပြီးနောက်စောစော 2014 ရာသီအတွက်, ChyronHego အဆိုပါ Daktronics ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီကြီးအဆုံး-ဇုန် scoreboard / ဗွီဒီယိုပြသမှုနှစ်ခုလုံးကားမောင်းဖို့ Virtual 1st များအတွက်ထုံးစံ interface ကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ Jaguar နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်လုံးဝကို manually data တွေကိုထည့်သွင်းဖို့အော်ပရေတာဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အမှားရဲ့ margin ဖျက်သိမ်းရေး, Daktronics နှင့် Virtual 1st အကြားအချက်အလက်များ၏လဲလှယ်အလိုအလျောက်။
"ကျနော်တို့ကပန်ကာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကြောင်းကိုအားလုံးပါပဲ။ ဒါကသူတို့အားကစားကွင်းအတွင်း၌နေတစ်ချိန်ကကျနော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးမည်မျက်နှာပြင်ကြီးရှိုးအပေါ်ချပြီးဆိုလိုသည်။ Virtual 1st နှင့်အတူကျနော်တို့တကယ်ကသူတို့ကိုအကြောင်းကိုအားပေးစရာတစ်ခုခုပေးခြင်းနေ, "ဆမ် Thompson ကထိန်းချုပ်တဲ့အခန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဂိမ်းနေ့ကဒါရိုက်တာ Jacksonville Jaguar ကဆိုသည်။ "ChyronHego ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ Daktronics interface ကိုတည်ဆောက်ရန်, ဗြိတိန်မှကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာများပျံသန်းအပါအဝင်နောက်ပြန်ကျော်ကွေး, - ။ နှင့် Virtual 1st ထိုအချိန်မှစ. အပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် "
ဂိမ်းအချိန်မျက်နှာပြင်ကြီးတင်ပြချက်များတိုးမြှင့်များအတွက် Virtual 1st ၏အောင်မြင်မှုကိုနှင့်တကွ, Jaguar '' အရောင်းဌာနယခုသုံးပြီးအပိုဆောင်းဝင်ငွေ-generation အခွင့်အလမ်းများကိုအမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေသည် ChyronHego'' s ကို Virtual နေရာထားရှိဖြေရှင်းချက်။ ဖြစ်နိုင်ချေ applications များအနက်ကို virtual ဂရပ်ဖစ်နေဖြင့်တိုးမြှင့်ကြော်ငြာနှင့်အတူအားကစားကွင်းတစ်လျှောက်လုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်၏တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
"ဒီ Jaguar '' installation ကို Virtual 1st များအတွက်ကြီးမားတဲ့မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအမြဲကအလွန်အမင်းစွယ်စုံထုတ်ကုန်ခဲ့သည်ကိုသိပေမယ့်ထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုကျော်လွန်နှင့်အားကစားကွင်းသို့ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုသက်တမ်းတိုးရေးအသုံးပြုပုံကတော့ Jaguar ကယ့်ကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရဲ့ Virtual 1st ထားကြပြီ, "မာကု Bowden, အကြီးတန်းထုတ်ကုန်မန်နေဂျာကလည်း, ChyronHego။ "ကျနော်တို့ကလည်းနက်ရှိုင်းစွာထုတ်ကုန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ Jaguar နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့ကပြွီးနောကျယခုကြှနျုပျတို့ရုံအားကစားကွင်းအတွင်းပရိတ်သတ်များ '' အတှေ့အကွုံမှစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထည့်သွင်းပေမယ့်အော်ပရေတာကိုသုံးပါနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်လည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသည်မသင့်သောအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်ပါတယ်။ "
ယင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါက ChyronHego ထုတ်ကုန်မိသားစု www မှာရရှိနိုင်ပါသည်။chyronhego.com ။
ChyronHego ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းခေါင်းဆောင်, ပလေးအောက်နှင့်တိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြား, သတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ပြန့်နှင့်အတူ Real-time data တွေကို visualization ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော TRACAB အဖြစ် (TM) player ကိုခြေရာခံစနစ်နှင့်အဆုံးမှအဆုံးသို့ BlueNet (TM) ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ - - ပေါင်းစပ်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု, Chyron နှင့် Hego Group မှကမ်းလှမ်းမှုကိုဆုရဖြေရှင်းချက်၏ 2013 နှစ်ကျော်အတူ 80 အတွက်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းစုပေါင်းအောက်မှာ ChyronHego အမှတ်တံဆိပ်။ Melville, နယူးယောက်, ကုမ္ပဏီလည်းချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရုံးတွေရှိပြီး, ဒိန်းမတ်, ဖင်လန်, ဂျာမနီ, မက္ကစီကို, နော်ဝေး, စင်္ကာပူ, စလိုဗသမ္မတနိုင်ငံ, ဆွီဒင်, နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရုံးချုပ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ChyronHego, www သွားရောက်ကြည့်ရှု။chyronhego.com ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ChyronHego/ChyronHego-JacksonvilleJaguars.zip
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Jacksonville Jaguar အသုံးပြုခြင်း ChyronHegoAnimated ရဲ့ Virtual ပထမဦးစွာ-Down နှင့်လိုင်း-of Scrimmage ဂရစ်ဖစ်ပေးဖို့ 's Virtual 1st
InGear အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
ကိုးကွယ်မှုလွှ Solutions ၏အသက်ဘုရားကျောင်းကို select VITEC အိမ်များ - အောက်တိုဘာလ 8, 2019
ဆစ်ဒနီရှိ METExpo 2019 မှာ IP ကိုဟန်ပြပြဇာတ်ရုံအတှကျအ Now ကိုလက်ခံခြင်းတင်ပြအဆိုပြုချက် - ဇွန်လ 6, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ChyronHego Jacksonville Jaguar Jumbotron တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual 1st 2015-04-30
ယခင်: Sonzero ရုပ်ရှင်ဟောလိဝုဒ်ရဲ့ဥဩစတူဒီယိုနှင့်အတူမဟာဗျူဟာ Link ကိုတဆင့်ထုတ်လုပ်မှုပါဝါတိုးမြှင်